NISA oo sheegtay inay gacanta ku dhigeen nimankii ka dambeeyay dilalkii maanta ka dhacay Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
NISA oo sheegtay inay gacanta ku dhigeen nimankii ka dambeeyay dilalkii maanta ka dhacay Muqdisho
Saraakiisha nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa goordhaw shaaciyay inay gacanta kusoo dhigeen seddax nin oo lagu tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen weerar iyo dilal qorsheeysan oo maanta ka kaa dhacay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho.
Hay’adda NISA ayaa hore u sheegtay in gaariga falka weerarka iyo dilalka lagu geystay lagu qabtay guri ku yaala xaafadda Jamhuuriya ee degmada Kaaraan, waxaana seddaxda nin ee haatan la qabtay loo heystaa inay ka dambeeyeen labo weerar oo maanta ka kala dhacay magaalada Muqdisho.
Mid ka mid ah saraakiisha NISA oo warbaahinta Bulshoweyn la hadlay ayaa u sheegay in ciidamada NISA ay soo qabteen seddaxda nin, islamarkaana haatan baaritaano dheeraad ah lagu haayo, si loo xaqiijiyo arrinta loogu tuhunsan yahay.
Dadkaan ayaa loo haystaa labo weerar oo mid ka mid ah uu ka dhacay Isgoyska Ceelgaabta ee degmada X/weyne, islamarkaana lagu dhaawacay taliye ka tirsanaa hay’adda nabad-sugidda qaranka ee NISA iyo darawalkiisa.
Weerarkaasi ayaa sidoo kale ku dhintay mid ka mid ah askartii ilaalada u ahayd taliyaha la dhaawacay.
Sidoo kale, weerarkii labaad ayaa ka dhacay agagaarka isbitaalka Digfeer ee degmada Hodan, kaas oo isna lagu dilay afhayeenkii hore ee maamulka Ximan iyo Xeeb Maxamed Cumar Hagafeey.
Labadaan weerar ee ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa mas’uuliyadiisa durbadiiba sheegtay Al-shabaab, waxayna sheegeen inay sii laba jibaari doonaan weerarada ceynkaan oo kale oo ay ku ugaarsanayaan mas’uuliyiinta dowladda Soomaaliya.